MTN oo laga joojiyey suuqa saamiyada Johannesburg - BBC Somali
MTN oo laga joojiyey suuqa saamiyada Johannesburg
Saamiyada shirkadda telefoonnada Moobaylka ee Afrika ugu weyn, MTN, ayaa maanta laga joojiyey suuqa saamiyada ee Johannesburg ka dib markii saamiyadoodu ay hoos u dheceen ilaa 8%. Hoos u dhaca saamiyada ayaa iminka gaaray 25% tan iyo markii lagu soo rogay ganaax gaaraya $5.2 Bilyan todobaadkii hore.
Guddiga Nigeria u qaabilsan arrimaha isgaarsiinta ayaa ganaax ku soo rogay shirkadda MTN, ka dib markii ay ku guul darraysatay inay khadka ka jarto dadka aan diiwaan gashanayn ee teleefoonnadooda isticmaala, waxaana loo qabtay inay laba todobaad ku bixiyaan ganaaxa.
Madaxa shirkadda,Sifiso Dabengwa, ayaa la fahamsan yahay inuu u duulayo magaalada Abuja si uu wadahadal uga galo bal in ganaaxa laga khafiifiyo.
Wada xaajoodyo ayaa maanta u socday labada dhinac sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Nigeria oo ah suuqa ugu weyn ee MTN ayaa waxaa ka diiwaan gashan 28.5 Milyan oo qof, waxaana ku xiga Iran iyo Koofur Afrika. Joojinta la joojiyey samiyada MTN ayaa sida la sheegay lagu xiray in shirkadda war laga helo.
“Warar baa sheegayey in shirkaddu ogolaatay inay ganaaxa bixiso, laakinse waxaan doonaynaa in aan shirkadda qudheeda warkaas ka maqalno” ayuu yiri Ferdi Heyneke oo ka tirsan suuqa saamiyada ee Johannesburg.
Hoos u dhaca saamiyada MTN ayaa galaaftay 2.7 bilyan oo gini oo ah qiimaha suuqa ee shirkadda oo lagu qiyaasay 13 Bilyan oo Gini.
Moobaylka MTN waxaa iminka isticmaala oo u diiwaan gashan 231 miyan oo qof oo kala jooga Afrika, Asia iyo Bariga dhexe